Qarax Askarta Itoobiya Lagula Beegsaday Jubbada Hoose. – Calamada.com
Qarax Askarta Itoobiya Lagula Beegsaday Jubbada Hoose.
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada hoose waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya qarax culus lagula beegsaday duleedka magaaladaasi.
Qaraxa oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago waxaa lala beegsaday kolanyo ka tirsan Xabashida Itoobiya oo ku sugnaay meel u dhaw deegaanka Yoontooy ee duleedka magaalada Kismaayo.
Dhawaaqa qaraxa waxaa laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah duleedka magaalada Kismaayo’waxeyna warar hoose sheegayaan in askarta Itoobiya qaraxa lagu gaarsiiyay khasaara baqti iyo dhaawac ah.
Duleedka Kismaayo waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro isugu jira qaraxyo iyo dagaalo toos ah oo lagu dilay tiro askar iyo saraakiil isugu jirta Kenyaati American iyo kuwa maleeshiyaatka maamulka Axmed Madoobe.
Halkan Ka Dhageyso Qaraxa Yoontooy.
Previous: Weerar Ka Dhacay Duleedka Magaalada Beledweyne.
Next: Sawiro Qaar Ka Mid Ah Odayaashii Soo Xulay Xildhibaanada Cusub Oo Isku Dhiibay Shabaabul Mujaahidiin.
1 thought on “Qarax Askarta Itoobiya Lagula Beegsaday Jubbada Hoose.”
Af qurmuun amxaar baaleh
Uskak badan amxaar baaleh
Injir badan amxaar baaleh
Asal kaba kufraa fool xun
Ashahaad ladirir baw eg
Uryo qurun Tigreey baaleh
Eebe Cadawgi wee yaano
Abtir maan wadaag noo
Islaam iyo kufraan kala nahaye
Ehel iyo walaal maan nihin
Oogada jirkood fiirsha
Astaan tood saliib weeye
Ilxaad iyo nijaas weeye
Anaguse ikhlaas weeye
Shahaadada Ilaah weeye
Shabaabow idlee gaalka
Aroor iyo alayl laaya
miinada u aas weeye
Arxan haw u galin weeye